Haino aman-jery sosialy sy fahombiazana: fanapahana vs fanitarana | Martech Zone
Talata, Aogositra 2, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny fahombiazan'ny marketing dia tonga amin'ny hetsika roa, manapaka sy manalava. Rehefa mahita ny paikadin'ny varotra maina sy mamokatra vokatra vitsy kokoa isika, dia vao mainka manapaka haingana kokoa isika… arakaraka ny ahombiazan'ny tetikady ankapobeny. Toy izany koa, rehefa mahita paikady mamokatra vokatra be izahay… miasa mafy izahay mba hanitarana ny valiny.
Ohatra, manandrana manao an'izany isan'andro amin'ny bilaogy aho. Rehefa tsikaritro fa be ny tian'izy ireo amin'ny Facebook saingy tsy betsaka ny retweet Twitter, dia horoahiko any ivelany indray. Raha mahita fanehoan-kevitra iray taonina amin'ny alàlan'ny Twitter sy Facebook aho dia hatosiko any amin'ny StumbleUpon. Rehefa hitako mitombo be ny lohahevitra dia hanoratra bebe kokoa momba an'io lohahevitra io aho, angamba fandaharam-potoana a Radio Marketing Tech asehoy momba azy io, na manomana horonantsary mihitsy aza.
Tetika iray hitako fa tena niasa tamin'ny bilaogy dia ny fampitomboana karazana infografika marketing. Ny tranokala dia nitombo teo anelanelan'ny 10% sy 15% tao anatin'ny roa volana lasa izay miaraka amin'ny endri-javatra fanampiny. Vokatr'izany dia nahazo fanairana natokana ho azy ireo izahay ary ankehitriny dia manao mpamorona sary mba hampiroborobo ny anay. Ilay farany farany amin'ny ny fiantraikan'ny finday amin'ny ecommerce hevitra iray nananako taorian'ny namakiako taratasy fotsy… ka tsy nila nanao ilay fikarohana akory izahay!
Ny momentum dia lakilen'ny marketing marketing amoron-tserasera marobe, ka arakaraka ny ahafahanao manalava paikady malaza, no tsara kokoa ny valin'ny fampielezan-kevitrao. Tsy mahita an'ity amin'ny Internet fotsiny isika fa mahita azy tsy an-tserasera ihany koa. Raha misy resona mihaino ny mpijery… toa ny Flo, ilay Ramatoa mandroso, mahita andiana dokambarotra miaraka amin'ny Lady Progressive izahay.
Tsy amin'ny marketing ihany koa. Zava-misy eo amin'ny fiainana fa mila manapaka ny ratsy isika ary manalava ny tsara. Mila manapaka ny fahazarana misakafo aho ary mianatra manohy ny fampihetseham-batako. Eo am-piasana dia mila manapaka ireo mpanjifa tsy mihaino antsika aho na mahazo valiny, ary hiasa mafy kokoa amin'ny fanitarana ny fifandraisana amin'ireo orinasa mihaino ary mahomby.
Miverina amin'ny marketing.
Orinasa maro no mahalala sy mahazo aina amin'ny ezaka marketing sasany ka tsy manapaka azy ireo akory… na dia tsy mahomby aza izy ireo. Heveriko fa mekanika voajanahary avy amin'ireo mpivarotra izay lasa mahazo aina amin'ny fampitaovana. Mihidy tsotra izao ny sain'izy ireo amin'ny fomba hafa. Miankina amin'ny mailaka ny mpivarotra mailaka, miankina amin'ny karoka ny mpivarotra karoka, miankina amin'ny doka ny mpivarotra dokambarotra mandray karama… faribolana ratsy izay tsy azo ihodivirana fa hiafara amin'ny fampielezan-kevitra tsy nahomby sy fidiram-bola very be.
Mifanohitra amin'izany aza, mpivarotra maro no tsy miraharaha izany Analytics ary aza tsapanao akory izay mandeha na tsia. Tsy manitatra ny ezaka ataon'izy ireo manerana ny fantsona izy ireo. Ny fampielezan-kevitra tsirairay dia manomboka amin'ny tsy misy fikarakarana eran'izao tontolo izao. Izany dia mahatonga azy ireo tsy afaka mampiasa vola amin'ny momentum efa napetrany.
Ny media sosialy dia manolotra antsika fitaovana hanitarana rehetra hetsika. Rehefa niresaka momba ny paikadim-barotra amin'ny horonantsary farany tamin'ny David Murdico aho dia niresaka momba ny tsy mampino ny fananana andiana mpankafy sy mpanaraka azy eo amin'ny toerany. Rehefa mampitombo ny tamba-jotra sosialy ny mpankafy sy ny mpanaraka anao ianao dia manambola amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra manaraka sy ny paikadim-barotra amin'ny ankapobeny.
Raha ny tena izy, io fampiasam-bola amin'ny fanarahana sosialy io dia manalava ny fampielezan-kevitrao manaraka… alohan'ny tsy nametrahanao ny hamonoana azy! Raha manana mpanaraka 100,000 XNUMX eo ianao izay mihaino ary nanome alalana anao hifandray amin'izy ireo, ahoana no hanovana ny fampielezan-kevitrao amin'ny marketing manaraka? Manantena aho fa zavatra eritreretinao izany.
Tags: boky marketingSearch MarketingWordPress
Ilay mpiasan'ny finday